सडकको खाल्डा पुर्न पनि भीआईपीको भ्रमण हुनैपर्ने परम्परा ! - Maxon Khabar
Home / News / सडकको खाल्डा पुर्न पनि भीआईपीको भ्रमण हुनैपर्ने परम्परा !
सडकको खाल्डा पुर्न पनि भीआईपीको भ्रमण हुनैपर्ने परम्परा !
२०७६ असोज १६ काठमाडौं
जनताले सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्नपर्‍यो भन्दा सरकार कहिले बजेट छैन, कहिले कामदार पाइएन, त कहिले निर्माण सामग्रीको अभाव भयो भन्छ काम भैहाले पनी कछुवाकाे गतीमा यही हाे शैली तर, जब काठमाडौंमा विदेशबाट अतिविशिष्ट अतिथिको आगमन तालिका तय हुन्छ, त्यसपछि रकेटको गतिमा काम हुन्छ, सडकको खाल्डाखुल्डी पुरिन्छ ।
अहिले काठमाडौंमा त्यही भइरहेको छ । बिहीबार रातको १२ बजिसकेको थियो । काठमाडौंबासी मस्त निद्रामा थिए तर सडकमा भने धमाधम काम भइरहेको थियो । कतै सडक पेटीमा रंगरोगन गरिँदैछ त कतै ज्रेब्रा क्रसिङमा रंग लगाउने काम भइरहेको छ । आफैं सडकमा खटिएका ठेकदार भनिरहेका थिए, ‘छिटो गरौं है ! दुई तीन दिनमा त सबै भ्याउनुपर्छ ।’ झट्ट हेर्दा कसैलाई लाग्नसक्छ, हाम्रो देशमा विकासको मोडल नै फेरिएछ, अब रातारात काम हुन थालेछ अब हुन्छ देशमा भनेकाे जस्ताे बिकास तर यथार्थ अर्कै ।
यस्ता संस्कारमा चाहे अहिलेकाे सरकार हाेस या बिगतका संस्कार चाही त्यही हाे । सार्क शिखर सम्मेलन, विमिस्टेक सम्मेलनदेखि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पटक–पटकको भ्रमणका क्रममा काठमाडौंमा सडकहरु यसरी नै रातारात चिल्लो पारिएका थिए र पेटी र रेलिङहरु रंगिएका थिए । अहिले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणका लागि दशैंको बेलामा सडक चम्काइँदैछ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी सम्भवत असोज २७ मा नेपाल ओर्लनेछन् ।
त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट सोल्टी होटलसम्म जानेछन्, राष्ट्रपति निवासमा भेटवार्ता गर्नेछन् । सम्भवतः द्वारिका होटलमा प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट र बैठक हुनेछ । यसैले यो रुटमा पर्ने सडक, पेटीहरु रातारात मर्ततसम्भार हुँदैछन् । रोचक त के छ भने जुन सडक खण्डमा पिच गर्ने काम भइरहेको छ, त्यही सडकको सार्वजनिक सवारी गुड्ने सर्भिस लेनमा भएको खाल्डाखुल्डी भने जस्ताको तस्तै छ । भीभीआईपीको सवारी गुड्ने मूल लेनलाई मात्र चिल्लो बनाइँदैछ ।
याे भाइरल भिडियाे हेनुर्स ः